NoFap အကယ်ဒမီသတင်းလွှာ - Your Brain On Porn
အဆိုပါ NoFap အကယ်ဒမီသတင်းလွှာထုတ်စစ်ဆေး
အဆိုပါအကယ်ဒမီမေးပါ: ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်သည်အီဂျစ်ပြည်တွင်နေထိုင်ပြီးမွတ်စလင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံမှုကိုအစ္စလာမ်နှင့်အီဂျစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်တားမြစ်ထားသည်။ ကျွန်တော်တို့လက်မထပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ ၂၆-၂၈ နှစ်မတိုင်ခင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ယခုမှာကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ ၉ နှစ်နှင့်တူသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို ဦး ဆုံးစတင်ရန် ၆ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိရှိသေးသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင်ထိတွေ့ခွင့်တောင်မရှိ၊ တကယ့်ဘ ၀ မှာအဝတ်အချည်းစည်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်မသည် Porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုကြည့်ပြီးအလွန်ငြီးငွေ့ခဲ့သည်၊ သူတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘဝပျက်စီးသွားသည်။ ငါတကယ်အလုပ်များနေရင်တောင် porn ကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အချိန်အမြဲပေးတယ်။ ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အားကစားမျိုးစုံလိုမျိုးအားကစားကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားသုံးမျိုးသင်ယူခဲ့တယ်၊ ငါကစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါ ၀ င်ခဲ့ပေမဲ့ငါကတော့ porn အတွက်အချိန်ရှာခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းလိုအပ်တာကြောင့်မင်းကိုကူညီနိုင်ရင်ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
ပထမဦးစွာပယ်, ငါသည်ဤအတွက်ဖြစ်မယ့်ခက်ခဲတဲ့အခွအေနေပါလိမ့်မယ်ပုံကိုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ လူအဖြစ်, သင့်မူလတန်းဇီဝရမ္မက်၏တဦးတည်းလိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနီးပါး 30 များမှာသည်အထိပြုလုပ်တတ်ပြီးကျေနပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်မှကျိန်းသေအတန်ငယ် tortuous ပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်ဆဲသောအခါ (သူတို့ထဲကအတော်များများအသက်အရွယ် 40 ကြည့်ဖို့အသက်ရှင်နေထိုင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့) သို့ပြန်သွားရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများ၏ကာလ၌လူတို့လက်ထပ်ရန်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တမ်းပိုရှည်ဆည်းပူးခဲ့ကြပေမယ့်, အပျိုဖော်ဝင်နေတုန်းပဲတစ်ချိန်တည်းမှာရိုက်နှင့်ဤအဘယ်သူ၏ဘာသာတရားကိုသို့မဟုတ်လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုလက်မထပ်မီအိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းတောင်းဆိုယောက်ျားတို့အတွက်အရေးပါသောစိန်ခေါ်မှုများပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဤအ Construction သူတို့ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးထွားမှုအတွက် tools များနိုင်ပါတယ်အမှန်တကယ်နှုတ်ဆက်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်လျှင်, ထို့နောက်သူတို့ရိုးရိုးကြီးမားတဲ့စိတ်ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အားလုံးကပြောသည်ခံရသဖြင့်, ငါသည်သင်တို့၏ပြဿနာအစစ်အမှန်လိင်မရှိခြင်းသည်ထင်ကြပါဘူး။ ငါကသင်တစ်ဦးစွဲရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအပေါ်စီးတစ်လမ်းအဖြစ်သင်၏လူမှုခွအေနမြေားကိုအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်နိုင်ထင်ပါတယ်။
သငျသညျစာဖြင့်ရေးသားဖူးတဲ့လမ်းကသငျသညျလိင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အကြောင်းကိုအတော်လေး compulsive ဖြစ်ကြောင်းအသံစေသည်။ ရီးရဲလ်လိင်ကဒီမှာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူယခုသင်များမှာလမ်းကိုလိင်ဆက်ဆံ start ခဲ့ပါလျှင်တကယ်တော့ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိပိုပြီးပြဿနာများပင်ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်။ အဖြစ်လိင်မရရှိနိုင်ပါနှင့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်အမြဲတစေဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်သူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်အဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။
သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်အများကြီးသင်ကပုံမှန်အားဖြင့် masturbate အဖြစ်သင်နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်မလား? သူတို့ကိုသင်သင်ကြည့်ရှုသည့်အတွက် pornstars ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းပြုမူဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်မလား? ထိုအမျှော်လင့်ချက်များအတော်များများဟာရိုးရိုးလက်တွေ့မဖြစ်ကြပြီးလျှင်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးသို့သယ်ဆောင်နေကြလေးနက်ပြဿနာများ (ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကနေအဖြစ်အကြှနျုပျ၏ clients များနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးစလုံးသိကြ) ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျဖြစ်စေပြုလုပ်ရန်သင့်လိင်စိတ်၏မာစတာတစ်ခုသို့မဟုတ်သားကောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို phrased င့်လမျးကိုအကြှနျုပျသငျသညျသားကောင်ဖြစ်လာပါတယ်ထင်စေသည်။ သင်လိင်နှင့်သင်သည်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သမျှသောအမှုအရာရှိသည်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကိုးကားခြင်းဖြင့်ကြိုးစားကြည့်နှင့်သင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအပြစ်လွတ်စေပုံရတယ်။ အဆိုပါပြဿနာကြောင့်သင်သည်သင်၏ core ကိုအနည်းဆုံးစဉ်းစားနေကြသည်ကိုဘယ်လိုဖွင့်လျှင်, သင်တို့သည်နောက်ကိစ္စသငျသညျကွိုးစားပါအဘယျသို့ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့နှင့်တူထင်ဖို့အသုံးပြုငါဆင်ခြေအောင်ရပ်တန့်နှင့်အပြည့်အဝကိုငါ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားများနှင့်တန်ဖိုးများအရသိရသည်အသက်ရှင်ဖို့ကျူးလွန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါငါ၏အအလှညျ့အပွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။ yeah ကခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? ဒါဟာငါ့ကိုအားကောင်းတွေအများကြီးတစ် heck ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်စေသင့်ရဲ့လိင်စိတ်ခြင်းဖြင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်သင်ကအောင်နိုင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးလုံးဝအသစ်သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သမျှသောလူတစ်ဦး BE နှင့်လူတစ်ဦးမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ရှုထောင့်ဖယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူစတင်သည်။
ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်နေစဉ် (၃ ရက်သို့မဟုတ် ၄ ရက်) လေ့လာခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်။ မရပါ။ ငါ့ခေါင်းကစာသားလေးကိုနာကျင်အောင်စတင်နေပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိုက်မဲတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ စာကြောင်းသုံးကြောင်း / လိုင်းသုံးချက်ကိုတောင်အပြည့်အဝနားမလည်ဘဲပြန်ဖတ်နေပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြောနေတယ်၊ ​​အဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒီနေ့သင်လေ့လာဖို့နေ့မဟုတ်သေးဘူး။ သွားပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ဝဗ်ကိုရှာပါ။ အဲ့ဒီအရာတွေနောက်ပိုင်းမှာငါ့ကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသံသရာသူ့ဟာသူပြန်လုပ်ပါ။
ငါမှာလည်းဒီပြproblemနာရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အဓိကအသစ်အဆန်းပုံစံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်အနည်းငယ်ထပ်မံရရှိရန်အတွက်အလွန်အမင်းယားယံနေပြီး၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမရှိခြင်းကြောင့်အရာများသည်ခဏတစ်ဖြုတ်အနည်းငယ်ရူးသွားတတ်သည်။
porn စွဲသည်အခြားစှဲအဖြစ်ဦးနှောက်အပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြသည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာငွေပမာဏရှိပါသည်။ တစ်ဦးရှိခြင်း porn အစီရင်ခံစာထွက်သူကိုထိုသည်အခြားစှဲကဲ့သို့အများအပြား porn စွဲ ဆုတ်ခွာကာလ။ သတိရဖို့အရေးကြီးဆုံးအရာကအမြဲယာယီဖြစ်ပါတယ်နှင့်အချိန်လွန်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ porn သင့်ရဲ့ဝေးလံသောအတိတ်၏ရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သင်တို့ကိုငါအရင်ကထက်ပိုခေါင်းနှစ်လုံး-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်း, အပြုသဘော feeling ပါလိမ့်မယ်သင်ကတိ။
ဆက်လက်တွန်းအားပေးပါ၊ ထိုအတောအတွင်းသင်သည်အပြုသဘောဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်အချိန်ကိုဖြည့်ပါ။ အကြှနျုပျ၏ # 1 အကြံပြုချက်: လေ့ကျင့်ခန်း - ငါဒီအလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး။ အပြင်သို့ ထွက်၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ပြေးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အလေးမတင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
စွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုစွဲမက်စေသည့်အရာမှာလူတို့သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီးသင်၏ပုံမှန်ဘဝ၏ရှုထောင့်အများစုကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည့်သိစိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားစေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က e-သင်တန်းများအတွက် (မဒါစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့, ဒါမှမဟုတ်အချို့ကိစ္စ၌) ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းဘို့သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် သန့်ရှင်းရယူပါ! အဆိုပါအတွင်းပိုင်းထဲကထံမှ Porn Quit လုပ်နည်း။ ဒါဟာကျွန်ုပ်တို့ရုံကလုံးဝ NoFap အမည်ဖြင့်မှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်သေချာအောင်ဖို့ကျူးလွန်နေကြတယ်, ကတိပေးမကြာမီလာမယ့်ပါတယ်။ သလောက်ကျနော်တို့အခုအချိန်မှာသငျသညျကလက်ချင်သည်အတိုင်း, Epic အချိန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ခက်ခဲ hustlin နေကြသည်မစိုးရိမ်ပါ!
ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ကအကယ်ဒမီ၏အထူးသဖြင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်အသည်းအသန်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်တစ်ခုခုပူဇော်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Get သန့်ရှင်းကိုဖွင့်သောအခါဘာကျနော်တို့လုပ်ဖို့သွားကြသည်ပါ! E-သင်တန်း, ငါတို့သည်လည်းအစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးအဘို့နိမိတ်လက္ခဏာကို ups တာခံရပါလိမ့်မည် သန့်ရှင်းရယူပါ! reboot စခန်း။ အဆိုပါ Reboot စခန်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုရယူလိုက်ပါသန့်ရှင်းမှုအတွက်မြင့်မားဆုံးကိုတာဝန်ယူမှုနဲ့ထောက်ခံမှုအုပ်စုတစ်စုများကိုပါ! စနစ်။
အဆိုပါစခန်းအတွက် Get သန့်ရှင်းများ၏ပိုပြီးစနစ်တကျနှင့်တစ်လောကလုံးအခြေခံမူအတူလိုက်ပါဖို့အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်ထောက်ခံမှုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်သည့်ပုဂ္ဂလိကဖိုရမ်, လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများပါဝင်သည်မည်! စနစ်။ ရုံဖောင်းပွမီးပေါ်မှာ '' တချို့ပိုပြီးဓာတ်ငွေ့ throwin!